Flat Glass Factory |China Flat Glass Manufacturers, Suppliers
Jinjing ndomumwe wevashoma vanogadzira munyika vanogadzira zvese zviri zviviri online (zvakaoma coated) Low-E uye offline (soft coated) Low-E girazi.
Jinjing inotora tambo yekugadzira yepasi yepamusoro yeLow-E yekugadzira kubva kuLeybold Germany, ine huwandu hwepagore hunosvika miriyoni masikweya metres, iyo inogona kupa vatengi nepamusoro-inoshanda sirivha katatu, sirivha yakapetwa kaviri, imwe sirivheri yeLow-E girazi pamwe nekomboni. zvigadzirwa zvegirazi.Tichivimba nehunyanzvi hwepasi rose hwePPG America, kuburikidza nekuzvimiririra R&D uye hunyanzvi, Jinjing yave mugadziri wekutanga muChina kupa off-site inodziya katatu sirivheri Low-E girazi.
ZHIZHEN anti-reflective girazi inogadzirwa neinnovation uye R&D zvichibva pane yakasimba coating tekinoroji ine vacuum magnetron sputtering process.Inogona kuderedza zvakanyanya kupindira kunoratidzira, panoramic kudzoreredza iyo yechokwadi ruvara uye yakasikwa mameseji ezviratidziro uye kugadzira yechokwadi yekuona chiitiko kune vashandisi.Nzvimbo dzekushandisa: yakakwirira-tsanangudzo inoratidza, mafoto mafuremu, mbozhanhare uye makamera ezviridzwa zvakasiyana-siyana, kumberi nekumashure mahwindi, nezvimwe.
3mm-12mm Tinted Float Glass (Bhuronzi, Bhuruu, Girazi, Girini)
Jinjing tinted girazi ine hunhu hweyakadzika UV transmittance uye yakanaka shading maitiro.Nekunaka kwayo ruvara uye yakanaka yekushongedza maitiro, inoshandiswa zvakanyanya mukati nekunze kushongedzwa kwezvivakwa, girazi, fenicha, imba yekugezera uye nezvimwe. Nekuzvimiririra innovation, kambani yedu yakagadzira euro bronze, yegoridhe bhuronzi, euro grey, yebhuruu grey, crystal. grey, ford bhuruu, Jinjing bhuruu, girini yechiFrench, pamwe chete neinowirirana solar control coating girazi (reflective girazi).